IINKONZO KUNYE NEENGOZI ZEZIBANE ZE-LED - UKUKHANYISA
Eyona ukukhanyisa Iinkonzo kunye neengozi zezibane ze-LED
Iinkonzo kunye neengozi zezibane ze-LED
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiingeniso kunye nezibi zezibane ze-LED kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zebhalbhu kunye namaqondo obushushu bombala.
Ukukhanyisa yinxalenye ebalulekileyo yekhaya lakho, hayi ngenxa yezizathu ezibonakalayo ezibonakalayo (ufuna izibane ukuze ubone xa kurhatyela) kodwa nangenxa yokuba uhlobo olufanelekileyo lokukhanya lunokunceda ukwenza indawo efanelekileyo kumagumbi akho.
Izibane nazo zinokucoca amandla amakhulu, kuxhomekeke kuhlobo lwezibane ozifakayo, zinokusebenzisa amandla angaphezulu okanye angaphantsi. Enye indlela yokulawula nokuthoba ityala lakho lilonke kukuqinisekisa ukuba usebenzisa iibhalbhu zokukhanya ezonga umbane.
Kule posi, siza kujonga izizathu zokuba kutheni abanye abantu bekhetha ukusebenzisa izibane ze-LED kwiimfuno zabo zokukhanyisa ekhaya. Inqaku? Izibane ze-LED ziyathandwa kuba zihlala ixesha elide kwaye zisebenzisa amandla.
uhlawulwa ngabaphi abakhaphi?
Makhe sijonge phambili kwinto eziyiyo kwaye zeziphi izinto ezilungileyo kunye nezibi zezibane ze-LED ekhayeni lakho.
Zithini izibane ze-LED?
Iimpawu zokukhanya kwe-LED kunye ne-Cons
Iindidi ezahlukeneyo zezibane ze-LED
Izibane eziqhelekileyo ze-LED
Ukucinywa / ukuKhanya kweeBhalbhu zokuKhanya kwe-LED
Izibane ze-Globe ze-LED
Ukuhombisa kunye nokuKhanyisa kwe-LED
Imibala yeBhalbhu yokuKhanya eKhanyayo
Iibhalbhu ze-LED eziMhlophe ezifudumeleyo
Iibhalbhu ze-LED ezimhlophe ezipholileyo
I-LED sisichazi sedayeti ekhupha ukukhanya. Ezi zibane zokukhanya ziqalisile ukubuyisela iibhalbhu zesiko ze-incandescent ekuthandeni ukukhanya kwekhaya.
Ukuchaza ukuba ziziphi izibane ze-LED kunye nendlela ezisebenza ngayo, masizithelekise nendlela ii-incandescent bulbs ezisebenza ngayo. Ngebhalbhu ye-incandescent, ukukhanya kwadalwa xa umbane wadlula kwintambo yocingo kwibhalbhu. Nge-bulb ye-LED, kukho i-semi-conductor ngaphakathi eyenza ukukhanya xa umbane ugqitha kuyo.
Iiflethi zomtshato ezimhlophe zomtshakazi
Ii-LEDs zingama-90 epesenti xa zivelisa ukukhanya kuneebhalbhu ze-incandescent. Zihlala ixesha elide njengoko ii-LED zingatshi njengezibane zekhandlela. Endaweni yoko, bafumana ukwehla kwe-lumen oko kuthetha ukuba i-LED iya kuqala ukunciphisa kancinci ekuhambeni kwexesha.
Ubomi be-LED kukuxelwa kwangaphambili xa ukwehla kwe-lumen kuya kuyenza ingabinamsebenzi, kulapho ukukhanya okuveliswa yi-bulb ye-LED kuye kwehla nge-30 yepesenti. Oku kuhlala kuthatha iminyaka, yiyo loo nto ii-LED zihlala ixesha elide kunezibane eziqhelekileyo.
Iimpawu zeZibane ze-LED
Ihlala ixesha elide -Izinto ezimbini ezilungileyo eziza kukhankanywa ngabantu malunga nezibane ze-LED yinto yokuba zinamandla ngakumbi kwaye zihlala ixesha elide kunezibane zendabuko.
Amandla ombane Amandla amancinci kufuneka asebenze kwi-semiconductor yebhalbhu ye-LED ukuvelisa ukukhanya, okuthetha ukusetyenziswa kwamandla okuncinci kunye nomrhumo wombane osezantsi.
Ukukhanya okungaguquguqukiyo ngokuhamba kwexesha - Njengoko besesitshilo, kuthatha ixesha elide ukuba ukukhanya kwebhalbhu ye-LED kuphele okanye kufiphale, ezinye iibhalbhu ezivelisiweyo zineengxelo zokuphila zeminyaka eli-10 okanye nangaphezulu okanye malunga neeyure ezingama-10,000 ukuya kuma-50,000 zokusebenzisa.
Kushushu kakhulu Izibane ze-LED azikhuphi bushushu buncinci okanye abunabo kwaphela xa zisetyenziswa, oku kuthetha ukuba ibhalbhu ayifudumali xa uchukumisa. Oku kunciphisa umngcipheko womlilo, nokuba ugcina ibhalbhu ivutha ixesha elide.
Inika ukukhanya okujolise kakhulu -Izibane ze-LED zikwindlela elungileyo ukuba ujonge ukubonelela ngezibane. Zisebenza kakuhle xa ufuna ukukhangela into enjengekhefu izibane zesilingi okanye njengezibane zomsebenzi. Zikulungele ukukhanyiselwa okungapheliyo, njengeekhawuntari zekhitshi okanye izibuko zangasese.
Ayilunganga ngokubonelela ngezibane ezingasasazekiyo -Basebuthathaka kancinci xa kufikwa ekunikezeleni ngezibane ezingasasazekiyo, ngokungathi ufuna isixhobo sokukhanyisa esinokukhanyisa igumbi lonke.
enkosi amanqaku emva komtshato
Abavelisi basebenzela ukulungisa oko, kwaye kukwakho iintlobo zezixhobo zokukhanya ngemibala ebonakalayo kunye nezinye izinto ezinokuthi ziphucule amandla e-bulb e-LED ukubonelela ngokukhanya okusasazekayo kwindawo enkulu.
Ikhupha ukukhanya okukhulu okuluhlaza okwesibhakabhaka -Ungafuna nokuzibamba usebenzisa izibane ze-LED kwigumbi lakho lokulala njengoko zikhupha ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kufana nokukhanya kwemini, kunye nezibane ezivela kwizikrini zeefowuni, iipilisi, iikhompyuter kunye nomabonakude.
Ingxaki ngokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kukuba inokukhohlisa inkqubo yakho ekucingeni ukuba kusesemini okuphazamisa isigqi sakho se-circadian kwaye ichaphazele ukukwazi kwakho ukulala kunye nomgangatho wakho wokulala. Ngenxa yoku, kuya kufuneka ukhethe i-amber okanye i-LED emhlophe ethambileyo kwigumbi lakho lokulala.
Iiflickers xa zidityaniswe notshintsho oluncinci - Izibane ze-LED azisebenzi kakuhle ngokufiphala. Unokufumana ezinye iibhalbhu ze-LED ezithi ziyancipha ziyahambelana kodwa nazo ziya kuthi ngamanye amaxesha zidanyaze xa zidityaniswe ne-dimmer. Oku kudanyaza kuhlala kusisiphumo sokungahambelani phakathi kwe-dimmer, i-fixture, i-transformer, kunye nebhalbhu.
Ayinakuhlala ixesha elide njengoko kuchaziwe Ngelixa izibane ze-LED kufuneka zihlale zisebenza iiyure eziyi-10,000 okanye nangaphezulu, zinokusilela. Kungenxa yokuba isekethe yebhalbhu iyakwazi ukufudumeza kwaye ikhokelele kwi-bulb evutha ngaphambi kwexesha.
Ukuba uya kwizixhobo zehardware okanye zasekhaya ezifuna izibane ze-LED, uya kufumana iinketho ezininzi, nazi ezinye zeentlobo eziqhelekileyo kunye neengcebiso eziza kukunceda ukhethe olona hlobo lubalaseleyo lwezibane ze-LED zokukhanya kwakho .
Ezi zinokusetyenziswa phantse kulo naluphi na uhlobo lwegumbi, qiniseka nje ukuba ujonga ukuba kungakanani ukukhanya okuluhlaza okuphuma kubo ukuba ufuna kwigumbi lakho lokulala. Ukuba une-flush mount okanye i-semi-flush light light fixture, ezi bulbs ziya kusebenza kakuhle nezo ntlobo zokulungiswa.
iwebhusayithi yomtshato malunga nathi imizekelo
Ezi zibhalbhu zisetyenziselwa ezona zinto zibalulekileyo zokukhanya. Ukuba ufuna ukukhanya, ibhalbhu eya kuthi ikhanyise iqonde ngqo kwindawo yokusebenza, lukhetho olufanelekileyo.
Ezi ntlobo zeebhalbhu zilungile ukuba ufuna ukwenza isibane esibanzi esithambileyo kwindawo enkulu. Oku kusebenza kakuhle kwizibane ezikhanyayo.
Ezi iibhalbhu ziza ngeendlela ezahlukeneyo ezinomtsalane kunye nokuhombisa. Ungazifumana ezi bulbs ukuze zisetyenziswe njengezibane zikaEdison okanye umkhondo wokukhanyisa. Olunye uhlobo lokukhanya okuqaqambileyo yimichilo yokukhanya kwe-LED enje ifunyenwe nayo ikhitshi phantsi kwesibane sekhabhathi .
Ngaphandle koku, ii-bulbs ze-LED zikwahlelwa ngokombala wokukhanya okukhutshiweyo. Kuya kufuneka ujonge koku xa usenza isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwebhalbhu oza kuyithenga.
Nantsi imibala emithathu eqhelekileyo, nangona abavelisi abohlukeneyo benokhetho olwahlukileyo.
Ukukhanya kolu hlobo lwebhalbhu ye-LED yeyona ikufutshane nokukhanya okufumanayo kwiibhalbhu zesiko ze-incandescent. Ezi zinqanaba lokuqaqamba elimalunga ne-2700k ukuya kwi-3000k (kelvins) kwi-avareji kunye ne-hue etyheli.
I-LED emhlophe epholileyo kukukhanya okuqaqambileyo okufana nokuvela kwimibhobho ye-fluorescent efumaneka kumaziko orhwebo. Iibhalbhu ezimhlophe ezipholileyo zibonelela ukusuka kwi-4100K ukuya kwi-5000K (kelvins) kwaye zine-tint eluhlaza okwesibhakabhaka.
Iibhalbhu ezimhlophe ezimhlophe ze-LED okanye umbala wemini wenzelwe ukulinganisa ukukhanya kwendalo. Ngelixa linomtsalane, olu luhlobo lwe-LED enokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, ke yiya kwenye into ukuba ufuna ii-LED kwigumbi lakho lokulala. Ibhalbhu emhlophe eqaqambileyo emhlophe ibonelela malunga ne-6500k (kelvins.
Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela iphepha lethu malunga izimvo zokukhanyisa kwigumbi lokutyela .
ukuba ubhale ntoni emtshatweni ubulele ikhadi
Ungasusa njani amaqhuma ezele kunye neenwele ezingenayo
indlela yokujongana namaqhuqhuva encakuba
isimemo magama kubantu abadala kuphela iqela